छोटो लगाउदा के भयो त ? : ज्योती मगर (फोटोफिचर) – Rajdhani Daily
छोटो लगाउदा के भयो त ? : ज्योती मगर (फोटोफिचर)
१२ वर्षअघि रुकुमबाट उच्चशिक्षा हासिल गर्न र कलाकार बन्न ज्योति मगर काठमाडौं आएकी थिइन्। रोल्पा नुवागाउ“मा जन्मिएकी उनले काठमाडौं आएर गायन यात्रा थालिन्। केही समय नृत्य कलाकारका रूपमा काम पनि गरिन् । त्यसक्रममा अग्रजकै संगतका कारण उनले गायनयात्रा अघि बढाउने अवसर पाइन् । स्कुलमा दोहोरी खेलिहाल्ने स्वभावका कारण गायनमा सजिलो भयो । सयभन्दा बढी गीत गाइसकेकी ज्योति पछिल्लो समय मोडलका रूपमा पनि स्थापित भएकी छन् । उनले लोकदोहोरीमा मह“गो पारिश्रमिक लिने मोडलका रूपमा परिचय बनाएकी छन् । गायनस“गै मोडलिºमा त्यत्तिकै प्रस्ताव आउने गरेको छ । यिनै चुलबुली ज्योतिसग राजधानी दैनिकका डब्बु क्षत्रीले गरेको सटकट संवाद :
अहिलेको परिचय ?
म गायिका, मोडल र स्टेज पर्फमर ।
केकेमा व्यस्त हुनुहुन्छ?
स्टेज कार्यक्रममै व्यस्त छु । भर्खर मोरङमा कन्सर्ट सकेर सोझै राजधानी दैनिकको अन्तवार्तामा आएकी हुँ । अब चार महिनासम्म विभिन्न
महोत्सवका लागि ‘बुक’ भइसकेकी छु ।
स्टेज कार्यक्रमबाट कस्तो कमाइ छ ?
राम्रो छ । स्टेज कार्यक्रमबाटै कमाएर काठमाडौं काँडाघारीमा घर बनाएकी छु । वर्षमा ५÷७ वटा स्टेज कार्यक्रम विदेशमै हुन्छ । स्टेज कार्यक्रमको कमाइबाट पूर्ण सन्तुष्ट छु ।
प्रतिकार्यक्रमको पारिश्रमिक कति हुन्छ ?
पैसा त ठ्याक्क नबताऊँ हो, दाजु । जे भए पनि कमाइ राम्रै छ ।
ज्योति मगरलाई हेर्न कि सुन्न आउ“छन् ?
हेर्न र सुन्न दुवै । धेरै युवा नै हुन्छन् । युवती पनि हुन्छन् । अचच्म के भने ८० वर्ष नाघेका हजुरबुबाहरू पनि मेरो स्टेज कार्यक्रम हेर्न आउनुहुन्छ । उहाँहरू पनि ‘हुटिङ’ गर्दै नाच्नुहुन्छ । ज्योति मगरलाई नै हेर्न आएको हुँ भन्नुहुन्छ । खुसी लाग्छ ।
तर हजुरबाहरू सेक्सी स्टाइल हेर्न आएका हुन् कि ?
मेरोजस्तै अंग त उहाँहरूले घरमै बूढीहरूकै हेरी हाल्नुहुन्छ नि † मेरो स्टाइल र प्रस्तुति नै हेर्न आउनुहुन्छ । उहा“हरू रमाइलो हेर्न र रमाइलो गर्न आउनुहुन्छ । मेरो गीतमा नाच्नुहुन्छ । आएर सेल्फी खिच्नुहुन्छ । बूढा मात्र हैन, तन्नेरी पनि त्यसैका लागि आउने हो नि †
बढी उत्ताउलो भनेर ज्योति मगरलाई केही ठाउमा बन्देज पनि लगाइयो रे नि ?
हो नि † इटहरीमा उपमेयरले मिटिङ गरेर मलाई स्टेज कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि आउन रोक लगाउनुभयो । तर, पछि मलाई त्यहीबाट निम्ता आयो र मैले त्यहाँ अत्यधिक दर्शकमाझ गाएर आएँ । उहाँ भने कार्यक्रममा आउनुभएन ।
स्टेजमा कपडा खोलेर दर्शकदीर्घामा फाल्ने, छोटो कपडा लगाउने, अर्धनग्न हुने आरोप छ नि ?
ज्याकेट लगाउँदा फाल्ने गरेकी थिएँ । विरोध आएपछि कपडा फाल्न छाडेकी छु । मलाई मन पर्ने ड्रेस नै सर्ट स्कर्ट र वान पिस हो । त्यसमा मलाई दर्शक हेर्न चाहनुहुन्छ । छोटो स्कर्ट लगाउँदा के भयो त ?
अलिकति निजी कुरा । अब एकबाट दुई कहिले हुने ?
यसको त जवाफ मसँग पनि छैन । दुई हुन चाहेको हो । अहिलेसम्म साइत जुरेकै छैन ।
विवाह गर्न फुर्सदै नभएको हो त?
पैसा नभएर कमाउनतिर लागें । अझै कमाउनुपर्छ भनेर भुलें । पहिला सामान्य केटा पनि साह्रै मन पथ्र्यो । आजकाल महŒवकांक्षा बढेर ‘सेक्योर’ हुने चाहनाले जस्तोतस्तोमा आँखा जाँदैन ।
कस्तो केटाको खोजी छ ?
मानवीयता भएको, मलाई इन्टरफेयर नगर्ने, परिवार र समाजप्रति जिम्मेवार । कुल, आर्थिक अवस्था राम्रो र पैसा कमाउने होस् । समझदार र सहयोगी भावनाको आफूमै ‘डिपेन्डेन्ट’ हुनसक्ने केटाको खोजीमा छु ।